Famatsian-drano madio eny amin’ny cité Ankatso I
Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa sy ny fikambanana tsy miankina na ny ONG Direct Aid ary ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga dia hisitraka ny rano fisotro madio ireo mpianatra monina eny amin’ny cité Ankatso I.
Notokanana androany 29 Aprily 2021 teny an-toerana ny fotodrafitrasa ahitana siniben-drano sy ny lava-drano mamatsy azy. Mandeha amin’ny herin’ny masoandro ireto fotodrafitrasa ireto ary manome rano 1500 litatra isan’ora. Ny siniben-drano kosa mahazaka rano 35 000 ka hatramin’ny 45 000 litatra isanandro.
Telo volana no nanatanterahan’ny orinasa Makouba forage izao fotodrafitrasa izao.
Ankoatra ny fisotroana sy ny fandrahoana dia ilain’ny mpianatra indrindra amin’izao fisian’ny valan’aretina izao ny fisian’ny rano eny an-toerana.
Tsara soritana fa nanatrika an’ity fitokanana ity ny Talen’ny kabinetra ao amin’ny Ministera, Diny Razanakolona sy ny Talen’ny « Centre régional des œuvres universitaires d’Antananarivo » (CROUA), Philibert Mahefatiana Rasolomandimby, ary ny solombavambahoaka Rakotomanga Lanto.
Mbola mitohy ny tetikasa ary hisy ny fametrahana siniben-drano hafa any amin’ny oniversiten’Antsiranana sy Mahajanga izay hotokonana tsy ho ela ihany koa. Hanaraka kosa ny fanaovana izany ho an’ireo oniversite hafa.
Marihina fa fiaraha-miasa hatrany amin’ny ONG Direct Aid no anatanterahana ity tetik’asa ity.